Air Cooled Water Chiller - Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd.
မေး: MOQ ဆိုတာဘာလဲ?
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, နမူနာအမိန့်တစ်ခုယူနစ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်, but the quotation will bealittle higher than the container order.
မေး: How to selectasuitable model?
က: We can chooseamodel for you based on the actual project details & related requirements, including the brand of compressor, refrigerant, outlet water temperature, စသည်တို့.
မေး: What’s the delivery lead time?
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, it depends on the PMC & production plan. For standard products, it is about 35 working days. If customized order is about 45 working days.
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, we only accept T/T by the bank based on the current economic situation.
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, မြေတပြင်လုံးယူနစ်များအတွက်တစ်နှစ်, တွန်းများအတွက်သုံးနှစ်.
မေး: How about the freight cost?
က: Our loading port is Shunde, တရုတ်. We work with many superior forwarder companies, including by air, by sea, by courier, or even door to door. Please indicate the model, quantity & destination port, then the freight could be provided for your reference.
မေး: ဘယ်လို - ပြီးနောက်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုကော?
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့သည်အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေး. သ, ကျနော်တို့ဖြန့်ဖြူးခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ & repair centers in Europe, the Middle East, North America & South America for the overseas markets.